Matchington Mansion 1.50.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.50.2 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Matchington Mansion
Matchington Mansion ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးပွဲစဉ်-3 ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများပဟေဠိဂိမ်းနှင့်သင်၏အိမ်ကြီးကိုအလှဆင်! , သကြားလုံးကိုက်ညီခြင်းဖြင့်အသစ်သောနေအိမ်ပုံစံမျိုး & ပရိဘောဂဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပါဝါ-Up နှင့်သင့်တစျခုလုံးကိုအိမျတျောကိုရှေးဟောင်းသုတေသန, သင့်မီးဖိုချောင် & ဥယျာဉ်ကိုအပါအဝငျ။ Matchington Mansion ပွဲစဉ်3ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများရူးများအတွက် Download!
ပွဲစဉ်သကြားလုံးနှင့် Matchington Mansion တစ်ခုစွန့်စားမှုဖြည့်ပျော်စရာဂိမ်းကစား! တစ်ဦးအပြစ်ဝမ်းကွဲမှသင်၏အိမ်သူအိမ်သားကာကွယ်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု Hone အသစ်ခန်းသော့ဖွင့်, သင့်မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ကိုရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်ပရိဘောဂကြားတွင်ဝှက်ထားလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ - ပိုက်ဆန်လျှော်ထဲမှာဇာတ်ဆောင်ဇာတ်ကောင်တစ်သွန်းနှင့်အတူအားလုံး။ သငျသညျကိုပင်အိမ်နီးချင်းများအပေါ်စူးစမ်းနှင့်သူတို့၏အခန်းကိုဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင်ဤစိန်ခေါ်မှုပွဲစဉ်-3 အိမ်ပြန်ပုံစံမျိုးပဟေဠိဂိမ်းသွားလာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
ROOM တွင်ဒီဇိုင်း & ပွဲစဉ်3ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများအရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း: Download မှထိပ်တန်း5အကြောင်းရင်း:
ဆန်းသစ်သောသင်၏အအိမ်ကြီးကိုအလှဆင်ဖို့ပျော်စရာဂိမ်းအတွက်ပွဲစဉ် & လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်သကြားလုံး!
လျှို့ဝှက်ချက်များ, ဆုလာဘ်များနှင့်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကြောင်း - အပိုင်းအစအတူတကွအပေါငျးတို့သညျလြှို့ဝှကျတ္ထု & အသစ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လာသင်ယူ
ဂိမ်း-in ဇာတ်ကောင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန် - သငျကစားနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ပုံပြင်များကိုလိုက်နာ
DIY အလှဆင်၏အခန်းတစ်ခန်းဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများ & ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တန်ချိန်နှင့်အတူအဆင့်ဆင့် Play - ဆုလာဘ်အဘို့ဝှကျထားသောဒေသများသော့ဖွင့်
power-တက် combo, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် Boosters နှင့်ကိုက်ညီခြင်းတစ်ပျော်စရာဂိမ်းအတွက်အဆင့်ဆင့်၏တန်ချိန်!
သင့်ရဲ့အိမ်ကြီး, ပါဝါ-Up နှင့်ကုန်းပတ်စတိုင်လ်၌သင်တို့၏မီးဖိုချောင် & ဥယျာဉ်တော်ထွက်ကိုအလှဆင်။ ဆုလာဘ်အဘို့ဝှကျထားသောဒေသများသော့ဖွင့်သစ်ပရိဘောဂနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အိမ်မှာပုံစံမျိုးနှင့်အတူအသီးအသီးကအခန်း makeover ။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်း Tiffany တို့ကကူညီခဲ့ဆန်းသစ်တိုက်ဆိုင်သည့်ဂိမ်း, ဇာတ်ဆောင်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့စီးအဘို့အိမ်တော်ကိုကြောင်တစ်ကောင်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးတစ်လျှောက်နှင့်အတူ Matchington Mansion စွန့်စားမှုပုံပြင်များထွက်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်!
ဝယ်ယူဘို့ optional ကို In-ဂိမ်းပစ္စည်းများနှင့်အတူအခမဲ့ Matchington Mansion Play ။ သင်သည်သင်၏ Device ရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable အားဖြင့်ငွေပေးချေအင်္ဂါရပ်ကို turn off နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်-3 စွန့်စားမှုပဟေဠိဂိမ်း Download - ထို MM အဖွဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းမျှော်လင့်! ကျနော်တို့ကပြည့်စုံအပေါ်အလွန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ကစားနေစဉ်အတွင်းသင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများသို့ပြေးသို့မဟုတ်သင်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါက, mm@firecraftstudios.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ရောက်ရှိဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။
Matchington Mansion အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ပိုနည်းလမ်းများ:
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/matchingtonmansion/
သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာဖို့ @Matchington Mansion ကိုရှာ။
Matchington Mansion အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Matchington Mansion အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Matchington Mansion အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Matchington Mansion အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.18k 7.83M
Matchington Mansion ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Matchington Mansion အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.50.2
ထုတ်လုပ်သူ Firecraft Studios
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.firecraftstudios.com/privacy.html
File Size: 178.81MB
Release date: 2019-09-13 18:13:50
လက်မှတ် SHA1: D5:45:FD:BA:D9:7F:C4:1F:F9:57:96:51:2A:F7:A6:2F:73:B0:45:01
အဖွဲ့အစည်း (O): MagicTavern
Matchington Mansion APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ